ILIFE A11, imwe nzira ine akawanda maficha uye mutengo wakanaka [Ongororo] | Nhau Gadgets
Miguel Hernandez | 25/03/2022 22:38 | Yakagadziridzwa ku 25/03/2022 22:40 | General, Reviews
I Hupenyu ine mhuri yemarobhoti vacuum cleaners uye mamwe marudzi emidziyo yakagadzirirwa kutibatsira nemabasa edu epamba ayo, nekuda kwekugadzira kwavo kwakanaka uye kuita, ave chiyero cheindasitiri, chirevo chakanaka kana uchitsvaga hukama pakati pemhando uye mutengo.
Zvingave sei neimwe nzira, Zvingave sei neimwe nzira, tinokuunzira kuongororwa kwakadzama kweiyo ILIFE A11 itsva, robhoti vacuum cleaner ine yakakwirira-magumo maficha uye ine mwero mutengo. Ziva nesu ese maitiro eiyi ILIFE A11 uye nei yakamisikidzwa seimwe inonakidza imwe nzira mumusika.
1 Dhizaini uye zvinhu: pakukwirira kweprimiyamu
3 Kuchenesa modes uye 2-in-1 system
Dhizaini uye zvinhu: pakukwirira kweprimiyamu
Kana iri dhizaini, ILIFE yafunga kuenderera mberi nekuchengetedza maitiro ayo ekugadzira, ayo ari iwo akagovaniswa nehuwandu hukuru hwemidziyo yerudzi urwu. Muchiitiko ichi takatarisana nemudziyo we 350 x 350 x 94,5 millimeters yehuremu hunodarika 3,5 kilogram, mukati meindasitiri zviyero.
Kune chikamu chezasi, kune mavhiri maviri ane cushioning, iyo multidirectional vhiri pamberi uye yakasanganiswa silicone roller uye nylon mabhurashi kuti ape kunyatso kuchenesa pamhando dzese dzepasi. Rear chikamu chemop coupling system uye bhurashi rimwe chete rinotenderera munzvimbo yepamusoro kuruboshwe. Kupfuura zvakakwana.
Iwe unofarira kutenga iyo ILIFE A11? zvino unogona tora mutengo wakanakisa kubva pano
Kumusoro isu tine LiDAR sensor inoraira mudziyo, maviri ON / OFF mabhatani uye kudzokera kuchiteshi chekuchaja uye piyano dema pechiso chinofadza mafeni eguruva uye zvigunwe. Hapana eccentricity inopfuura yayo yakasarudzika yekuchaja system.
Mabvazuva, kure nekuve nemapini pazasi pemudziyo, iri kumberi ine nzvimbo mbiri dzakarebesa esimbi dzinoenderana nedzakaenzana mubhesi yekuchaja, yakabatana nemagetsi. Ini handizive mabatiro angangove nawo pamwero wengozi yemagetsi, chokwadi, ini ndinosarudza mapini echinyakare ari pazasi pechishandiso.
Iyi ILIFE A11 ine ROHS certification pamwe nepamusoro pesimba rekukweva rinosvika 4.000 Pa zvichienderana nekuchenesa modhi yatakasarudza. Kuti tiite izvi, ine 5.200 mAh bhatiri rinotipa kuchenesa kwemaminetsi angangoita zana nemakumi masere. ine yakanyanya hupfumi yekusveta modhi. Hatina kukwanisa kuonesa izvi zvakanyanyisa nekuti saizi yeimba yakashandiswa kuongororwa idiki zvakanyanya pane yekuchenesa ILIFE A11, ndiko kuti, isu hatina kukwanisa kudhiza inopfuura 50% yebhatiri yayo.
Isu tine akawanda-pamusoro pemepu system
Ane tekinoroji LiDAR 2.0 iyo inoita mamwe anonakidza uye anokurumidza mepu, achiwana rough 3.000 samples pasekondi kwehupamhi hwemamita masere. Iyo CV-Slam algorithm yakaratidza mhedzisiro yakanaka mukuwongorora kwakaitwa, kugadzira mepu zvipingamupinyi zvakaita semibhedha, masofa uye kunyange matafura zvakanaka. Mushure mekucheneswa kwechipiri, inogonesa zvakanyanya kuita uye inomhanyisa maitiro nenzira yakasarudzika, chinhu chinoyemurwa zvakanyanya pasi, apo mudziyo haugone kusiiwa kune iwo maturusi.
Kuchenesa modes uye 2-in-1 system
Isu tinosimbisa chokwadi chekuti ILIFE inovimbisa kuti muA11 modhi tine yechokwadi-mu-imwe yekukwesha uye vacuum system. Kunyangwe ichi chiri chokwadi chatinofanira kujekesa, isu tine tangi rimwechete remvura netsvina, 500ml yemarara uye chete (asi yakakwana) 200 yemvura. Muchiitiko ichi, zvinokatyamadza kuti ine "kukwesha" sisitimu inoteedzera maekisesaizi emaoko nekufamba zvishoma, izvi zvinoita kuti iwedzere kushanda uye kudzivirira fogging. Nekudaro, sezvandinowanzo taura, mamops aya akagadzirirwa kupa kubata kune parquet kana pasi pemapuranga, uye anowirirana zvakanyanya zvakanyanya neceramic pasi apo anosiya akawanda emvura mamakisi.
Tsvina tangi: 500ml
Yakasanganiswa Tangi: 300ml + 200ml
Iyo inokwanisa kumop uye kupukuta panguva imwe chete, isu tichagadzirisa izvo kuburikidza nenharembozha yayo. Muizvi, Yemahara kune ese ari maviri Android uye iOS isu tinokwanisa kuyananisa iyo ILIFE A11 uye kutoibatanidza neAlexa, Amazon's virtual mubatsiri kuteerera mirairo yedu chaiyo yekuchenesa mabasa.
Nekudaro, isu tine nzira mbiri dzekushandisa nemanyorero, kuburikidza neinogoneka kudzora inosanganisirwa nemudziyo, pamwe neiyo chaiyo yekudzora sisitimu inosanganisirwa mukushandisa. Kana tangotarisa imba yese tichakwanisa:
Gadzira hurongwa hwekuchenesa nzvimbo
Gadzira zonal yekuchenesa system
Ita zvirongwa zvekuchenesa
Ita kuchenesa kwemagumo kana "Spot Mode"
Pakati pemamwe mabasa akajairika, senge mukana wekugadzirisa masimba matatu ekusveta.
Isu hatina, zvisinei, ruzivo chairwo pamadecibels pakati peizvi Hupenyu A11, zvisinei, iri kure nekuve imwe yeakanyarara pamusika. Nekudaro, ine "yakanyarara" yekuchenesa sisitimu inoderedza simba, asi nezvikonzero zviri pachena, zvakare inoderedza zvakanyanya ruzha rwunobudiswa.
Este ILIFE A11 inodhura 369 euros semutemo wakajairwa, kunyangwe paine zvakawanda zvinopihwa paAliExpress, kunyangwe nekutumira kubva kwaunogara, izvo zvinokutendera kuti unakirwe nayo pamutengo wakagadziridzwa. Ichi ndicho chimwe chikonzero chekuchengeta mupfungwa kuti iyi ILIFE A11 imwe nzira izere nepamusoro-yekupedzisira maficha pamutengo uri pakati pepakati. Iwe unotoziva kuti hunyanzvi hwekukwesha semutemo wakajairwa huri kure neiyo inopihwa nemanual scrubbing system, asi. kuyamwa, 3D scanning uye simba rayo rekukweva rinoita kuti ive sarudzo inonakidza.
Yakatumirwa pa: 25 March we2022
Kugadziridza kwekupedzisira: 25 March we2022
Chete ne Alexa
Weird kuchaja system
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » ILIFE A11, imwe nzira ine akawanda maficha uye mutengo wakanaka [Ongororo]